Jadwalka Dugsiga wuu Isbeddelay Sababtoo ah Cimilada Cilladaysan: 2021-22 - Rosemount-Apple Valley-Eagan ISD 196
Haddii kormeeraha guud ay tahay inuu beddelo jadwalka dugsiga caadiga ah cimilada oo xun awgeed
Labada maalmood ee ugu horreeya cimilada xun (“maalmaha barafka”) inta lagu jiro sannad dugsiyeedka, dugsiga ayaa loo baajin doonaa ardayda jadwalka u ah inay maalmahaas dugsi yeeshaan, oo ay ku jiraan kuwa soo socda: dhammaan fasallada si joogto ah loo qorsheeyey, maalintii oo dhan iyo waxbarashada beesha dugsiga kadib waxqabadyada, Waxbarashada Aasaasiga ah ee Dadka Waaweyn, Kala-guurka Plus, Waxbarashada Gaarka ah ee Carruurnimada Hore, Waxbarashada Qoyska ee Carruurnimada Hore, iyo dhammaan hawlaha dugsiga hoose iyo dhexe dugsiga kadib iyo fiidkiiba (Go'aan ku saabsan hawlaha dugsiga sare dugsiga kadib iyo fiidkiiba eeay samayn doonto oo ay gaadhsiin donto mid-afternoon), iyo
Maalmaha cimilada ee sedexaad ilaa toddobaad inta lagu jiro sanad dugsiyeedka, dhammaan ardayda loo qorsheeyey inay dugsi yeeshaan maalmahaas waxay ka qaybqaadan doonaan Maalinta E-Learning-ka guriga (eeg hoos). Dhammaan hawlihii dugsiga hoose iyo dhexe wixii ka dambeeya dugsiga iyo fiidkii waa la joojiyay; go'aanka ku saabsan waxqabadyada dugsiga sare waxa samaysay oo soo sheegi doonta mid-afternoon.
Maalmaha Barashada Online-ka ah: Bilowga Cusub Sanadkan
Sharciga Minnesota wuxuu u oggol yahay iskuulada degmadu inay haystaan ilaa 5 Maalmood oo E-Learning ah sanad dugsiyeed kasta si loogu oggolaado ardayda inay sii wataan barashada guriga markay xaaladaha cimiladu ka dhigaan mid aan ammaan ahayn inay dugsiga tagaan shaqsi ahaan. Haddii ardayda qaarkood aan loo qorsheynin inay dugsiga joogaan maalintaas, kama qaybgalaan Maalinta E-Learning.
Qoysaska iyo shaqaalaha waxaa lagu wargelin doonaa Maalinta E-Learning iyada oo loo marayo wicitaanka taleefanka Maasanjarka dugsiga Subax hore, emayl, farriin qoraal ah (haddii la doorto), iyo websaydyada iyo baraha bulshada.
Macallimiintu waxay la xiriiri doonaan ardayda iyada oo loo marayo Seesaw iyo Schoology, waxayna soo diri doonaan asaymantiyo,waxqabadyo waxbarasho iyo khayraado lagu hagayo barashada ardayda maalintaas, laakiin ma jiri doonto waxbaris isku mid ah (Zoom).
Macallimiinta ayaa la heli doonaa inta lagu jiro saacadaha dugsiga caadiga ah si ay uga jawaabaan su'aalaha ardayga/qoyska ee lagu soo diro emaylka iyo farriimaha wicitaanka taleefanka ee ku hadhay farriimaha codka ah. Ma jiri doono fadhiyo saacad-isku-eg (Zoom) ah.
Haddii xubin ka mid ah shaqaalaha aan la heli karin inta lagu jiro Maalinta E-Barashada sababo la xiriira jirro ama maalin shaqsiyeed, macallinka ayaa fariin u diri doona Seesaw ama Schoology si uu ugu wargeliyo ardayda iyo qoysaska maqnaanshahooda.
Ardaydu waa inay maalin walba guriga la yimaadaan iPad-ka ama Chromebook-ka ay degmadu siisay.
Subaxda Maalinta E-Learning, ardaydu waa inay ka eegaan Seesaw ama Schoology tilmaamaha macallinka shaqooyinka maalintaas waxaana la filayaa inay ku hawlan yihiin hawlahooda waxbarasho ee loo baahan yahay.
Ardayda waxaa loo tixgelin doonaa imaanshaha Maalinta E-Learning haddii waalidka ama mas'uulka uusan xaqiijin maqnaanshaha.
Macallimiintu waxay la xidhiidhi doonaan waqtiyada kama dambaysta ah ee asaymantiyada Maalinta E-Learning ee Seesaw ama Schoology, iyo qodobo ku habboon ayaa loo samayn doonaa ardayda leh IEPs iyo qorshayaasha 504.